MCC र सिमाको बारेमा खबरदारी गर्दै Claim The Border ग्रुप
जुन ४ पोखरा
स्वस्फुर्त रूपमा बनेको गैर–राजनैतिक युवाहरु सङघठन क्लेम द बोर्डर ग्रुपले अहिलेको मुख्य राष्ट्रिय मुद्दा एमसिसि र सिमा विषयमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन नयाँ ढाचाको विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
ग्रुपले पोखरामा मात्र नभई नेपाल अधिराज्यका विभिन्न ठाउँबाट विरोध गर्ने ग्रुपका पोखरा संयोजक गोविन्द आचार्यले बताएका छन् । क्लाईम द बोर्डर ग्रुप पोखराले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारलाई खवरदारी गरेको छ ।
यस्तो छ विज्ञप्तीमा :
सर्वप्रथम त हाम्रो समुहको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सीमा संबन्धि विवादको बिषयमा युवाहरुलाई सु-सुचित गर्ने, त्यो सम्बन्धि अध्ययन बढाउने र श्रोत आदन-प्रदान गर्ने हेतुले हामीले Claim The Border समूह गठन गरेका हौँ। सीमाको बिषयमा अनवरत काम गर्नुभएका सीमाविज्ञ र सो सम्बन्धि काम गरिरहनु भएका विभिन्न व्यक्तित्वहरुको सहयोगमा हामीले सीमा संवाद नामगरि online कार्यक्रम चलायौँ। भैरव रिसाल, सुशिला कार्की र द्वारिकानाथ ढुङ्गेलसँग संवाद गर्यौँ। सीमा सम्बन्धित अझै कार्यक्रम गर्ने तय गर्दै गर्दा सरकारको तर्फबाट नक्सा सार्वजनिक भएपछि हामीले हाम्रो कार्यक्रमको बिषय र स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने सल्लाह सुझाव पायौँ। यतिन्जेल हामीसंग लगभग ५०हजार युवाहरु जोडीईसक्नुभएको थियो।
देशमा जे भईरहेको छ त्यो ठिक छैन, यसले हाम्रो सपना हाम्रो अभिलाषा पूर्ण हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। देशविकासको जग मानिएका हामी युवाहरुमा पनि दुरदर्शिताको कमि, ज्ञानको कमि र संजालको कमि रहेको हामीले महसूस गर्यौँ। शो खाडललाई पुरा गर्न सीमा विवादलाई अनवरत रूपमा नजर राख्दै अन्य राष्ट्रिय महत्वमा पनि युवा आवाज उठाउन, सिक्न सिकाउन प्रयोग गर्ने सामुहिक निर्णय गर्यौँ। सोहि अनुरुप अहिले हामि MCCको बिषयमा केन्द्रित भएका छौँ।
MCCले पुरा देशनै विभाजित गरिराखेको हामीले देखिरहेका छौँ। पक्ष र बिपक्षमा सरकार, प्रतिपक्षि, बिद्यार्थी, राजनैतिक दल देखि सम्पूर्ण युवाहरु विभाजित छन्। वास्तवमा MCCके हो? यसको सुरुवात किन र कसरि भयो? यसले नेपाललाई अल्पकालीन र दिर्घकालिन रूपमा कस्तो असर पार्छ? पारित भयो वा भएन भने के हुन्छ ? यस्तो प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न र यो सम्बन्धि ज्ञानको धरातल बढाउन हामीले MCC संवाद शृंखला सुरु गर्यौँ जसमा हालसम्म लिलामणि पोख्रेल , युग पाठक, गोविन्द राज पोखरेल र झलनाथ खनालले भाग लिईसक्नु भएको छ। हामी यो सम्बन्धि अझै कार्यक्रम गर्ने तयारी गर्दै छौँ।
हामी स्वत: स्फुर्त रूपमा बनेको गैर-राजनैतिक युवाहरु सङघठन हो। एक मानेमा हामी देश बन्न सक्छ, हामीले नै बनाउने हो र बनाउन सक्छौँ भन्ने युवाहरुको समूह हौँ। त्यसको लागि तर हामी भित्र धेरै परिवर्तन आउनुपर्छ, हाम्रो ज्ञानको धरातल बढ्नुपर्छ, संजाल बढ्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। राष्ट्रिय महत्वको बिषयमा विगतमा धेरै गल्ति भएका छन् जसको असर हामीले अहिलेसम्म भोगिरहेका छौँ। युवाहरु सु-सुचित नहुनु, बहकावमा आउनु र राजनैतिक भुमरीमा फंस्नु त्यसको एउटा महत्वपुर्ण कारक तत्व हो।
अब फेरी त्यस्तो हुन नदिनु हाम्रो कर्तव्य हो।
कुनै पनि राजनैतिक निर्णय लिंदा हाम्रो राजनैतिक दलले, हाम्रा नेताहरुले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, त्यसप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिले निर्णय गर्ने र पछि पानीमाथिको ओभानो हुने प्रबृत्ति हामीले धेरै देख्यौँ।
त्यसैले अहिलेको राष्ट्रिय महत्वको दुईवटा बिषय (MCC र सीमा) लगायत कोरोना महामारीमा सरकारलाई खबरदारी गर्नु, त्यसप्रति जनप्रतिनिधिहरूलाई जवाफदेही बनाउनु हामीले हाम्रो कर्तव्यका रूपमा लिएका छौँ।
सोहि अनुरुप हामीले हाम्रो शिप, हाम्रो नविन सोंच प्रयोग गरि नयाँ ढाँचाको विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखेका हौँ। जसमा हामि स्वचालित यन्त्र (Robot)को प्रयोग गरि विरोध प्रदर्शन गर्दै छौँ, महामारीलाई मध्यनजर राख्दै। हाम्रो यो प्रयासले सीमा र MCCजस्तो गम्भीर राष्ट्रिय मुद्धामा सबैको ध्यानआकर्षण गराउनेछ र बिरोधको नयाँ आयाम सुरुवात गर्ने छ भन्ने हामीले बिश्वाश लिएका छौँ।
यो नितान्त हाम्रो समुहको विचारबाट, हाम्रो शिपबाट निस्किएको हो भन्ने कुरा पुनश्च जानकारी गराउन चाहन्छौँ।
धेरै भन्दा धेरैमा हाम्रो खबरदारीको सूचना पुर्याउनु हुनेछ भन्ने बिश्वाश लिएका छौँ।
पोखरा कार्यक्रम संयोजक
सार्वजनिक यातायातमा निगरानी